Gobolka Liiban ee DDS oo ay ka biloowdeen kacdoono ka dhan ah Madaxweyne Mustafe Cagjar – Radio Daljir
Gobolka Liiban ee DDS oo ay ka biloowdeen kacdoono ka dhan ah Madaxweyne Mustafe Cagjar
Seteembar 10, 2019 3:19 g 0
Muddo laba todobaad ah gobolka Liibaan ee koonfurta Dowlad Deegaanka Soomaalida (DDS) waxaa ka socda bannaanbaxyo waxa ayna maalmahaan noqdeen kuwo joogto ah. Bannaanbaxyada Liibaan ayaa looga soo horjeedaa xukuumadda Madaxweyne Mustafe Cagjar oo lagu eedeynayo waxqabad la’aan iyo waliba ka warhayn la’aan bulsho.
Degmooyinka ay bannaanbaxyadu ka socdaan ayaa kala ah Guradhaamoole, Baqaaqsa iyo Filtu oo dhammaantod ka tirsan gobolka Liibaan ee DDS.
Waxaa indhawaale isa soo taraya eedeymaha lala beegsanayo Madaxweyne Mustafe Cagjar ayna kamidyihiin in uusan matalin bulshada deegaanka uuse siyaasad ahaan u matalo hadba qowmiyadda haysa talada dalka Itoobiya, haddana uu aad uga agdhowyahay masuuliyiinta dowlad deegaanka Oramada.
Eedaha kale ee loo jeedinayo Madaxweyne Mustafe Cagjar ayaa ah in uu si hoose ula shaqeynayo hoggamiyayaasha Oramada si loo xiro xerada barakacayaasha Soomaalida ee Qoloji ee ku taalla duleedka magaalada Jigjiga, ayna ku nool yihiin kumanaan qoys oo malleeshiyaadka Oromadu ka soo barakiciyeen dhulkoodii.
Ujeedka xeradan loo xirayo ayaa lagu tilmaamay in ay tahay sidii indhaha caalamka looga qarin lahaa dhibaatada ay geysteen malleeshiyaadka Oramadu, iyo sidii loo xalaaleysan lahaa guryihii iyo beerihii dadka Soomaalida laga soo barakiciyey.
Jawar Maxamed, hoggaamiyaha ruuxiga ee maleeshiyaadka Oramada ee loo yaqaan QEERO, ayaa maalmo kahor Madaxweyne Mustafe Cagjar waxa uu ku soodhaweeyey magaalada Jigjiga. QEERO ayaa waxa ay barakicin baahsan ku hayaan dadka Soomaalida ee Dowlad Deegaanka.
Dowlad Deegaanka Soomaalida 216 Wararka 20683
NUSOJ condemns interference with editorial freedom